China Cascade retort orinasa sy mpanamboatra | Dingtaisheng
Tazomy ny rano mety amin'ny faran'ny retort. Raha ilaina dia azo tsindrona mandeha ho azy ity ampahan'ny rano ity amin'ny fiandohan'ny fanafanana. Ho an'ny vokatra feno hafanana, io ampahan'ny rano io dia azo hafanaina aloha ao anaty fitoeran-drano mafana ary avy eo atsindrona. Mandritra ny fizotran'ny sterilization iray manontolo, ity faritra amin'ny rano ity dia mivezivezy matetika amin'ny alàlan'ny paompy mikoriana avo amin'ny alàlan'ny takelaka fanaparitaka rano izay eo an-tampon'ny retort, ary mizara mitovy ny rano avy any ambony ka hatrany ambany amin'ny endrika rano fandroana ho hafanana ny vokatra. Izany dia miantoka fizarana hafanana.
Mandritra ny fizotrany rehetra, ny tsindry ao anaty ny retort dia fehezin'ny programa amin'ny alàlan'ny famahanana na famoahana rivotra voafintina amin'ny alàlan'ny valizy mandeha ho azy mankany amin'ilay valiny. Noho ny fanamafisana ny cascade, ny tsindry ao amin'ny retort dia tsy voakasiky ny maripana, ary ny tsindry dia azo apetraka malalaka arakaraka ny fonosana vokatra samihafa, izay mahatonga ny fitaovana azo ampiharina be dia be (kapoaka telo, kapoaka roa, fonosana malefaka kitapo, tavoahangy vera, fonosana plastika sns).
Previous: Fanamafisana ny rano amin'ny famafazana rano Retort
Manaraka: Ny valiny hafafin'ny sisiny